वन सम्पदा संरक्षणको दुरुपयोग | दिशानिर्देश कञ्चन साप्ताहिक
वन सम्पदा संरक्षणको दुरुपयोग
दिशानिर्देश समाचार । महेन्द्रनगर, ३ असार
हिमाली भोग होस् वा तराई पहाड त्यहाँका युवा युवतीहरुको रोजगारी, स्वरोजगारको जिम्मा सरकारले लिनुपर्दछ । आज देशको अमुल्य वन सम्पदा माथि खेलवाड भइरहेको छ ।
बझाङ, दार्चुलाको मात्र पनि कुरा गर्दा सामुन्ने छिमेकी भारतको हिमाल पनि छ नेपालको हिमाली पहाड झै त्यहाँ पनि यार्साहरुको उत्पादन हुन्छ जहाँ टिप्न यार्सा संकलन निषेध गरेको छ । भारतमा पनि ठूलाठूला साल सिसमका जंगल छन् सुरक्षित छ । नेपालबाट यार्सा, काठ तस्करहरुले भारत भरी पुगाई दिने गरेको छ । यस्तै अन्य जडिबुटीहरु पनि छन् ।
भारतमा जुन जंगलबाट एक विरुवा उखेले दुईको रोपण हुन्छ त्यहाँको प्राकृतिक ढुकुटीमा फरक पर्दैन । कानून विरुद्ध काम गर्ने माथि कारवाही हुन्छ । यहाँ त्यस्तो छैन ठीक उल्टो छ । २०५१÷५२ साल तर्फ दार्चुला जिल्लाको उत्तरी भेगहरुमा प्रशस्त जडिबुटीहरुको उत्पादन हुन्थ्यो । ट्रकहरुमा इजाजत लिएर भारत निकासी गरिन्थे । त्यसबेला एउटा पाँचऔलेको रोयल्टी रु. पाँचरुपैया थियो भने तराईमा उत्पादन हुने खयरको प्रतिकिलो रु. दश रुपैया रोयल्टी थियो । त्यस्तै यार्साको रोयल्टी रु. प्रतिकिलो ३ हजार रुपैया थियो ।
अधिकतम यार्सा विक्री मुल्य त्यस समयमा रु. १५ हजार प्रतिकिलो रहेको कुरा जिल्ला वन कार्याय दार्चुलाबाट जानकारी प्राप्त भएको थियो । यति छोटो अवधिमा यी जडिबुटीहरुको ह्रास हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो अदूरदर्शी नेताहरुको तथा अनविज्ञ जनताको करामत हो भन्नमा आपत्ति छैन ।
← योग दिवसको उपलक्ष्यमा निबन्ध प्रतियोगगिता
डडेल्धुरा जिल्लामा उम्मेदवार छनोटले खैलाबैला →